Signal: Ku wada xiriir SMS, Email, Twitter iyo Facebook | Martech Zone
Jimcaha, Sebtember 6, 2013 Isniin, Janaayo 16, 2017 Douglas Karr
signal waa madal isku dhafan oo loogu talagalay ganacsiyada si ay u maareeyaan, ula socdaan oo u cabiraan dadaalkooda suuq-geynta guud ahaan mobilada, bulshada, emaylka iyo kanaallada internetka. Asal ahaan, CRM + suuqgeynta moobiilka + suuq geynta emaylka + maareynta warbaahinta bulshada.
Waxaan aaminsanahay in shaqada suuqleydu ay noqotay mid sii murugsan sababo la xiriira kororka degdega ah ee kanaalada suuq geynta, iyo qalabka lagu maareeyo. Barnaamijkeenu wuxuu ka caawiyaa shirkadaha inay si fudud u maareeyaan dadaalkooda suuq geynta hal meel oo dhexe ah iyagoo isla markaana bixinaya sawir mideysan oo ku saabsan saldhigooda macaamiishooda
Meelaha muhiimka ah ee barxadda Calaamadaha ayaa ah:
Dashboard - Isku keen dhammaan suuqgeyntaada iyo howlahaaga hal dashbood, adigoo ka fogaanaya dayactirka nidaamyo badan oo software ah.
Maareynta Xiriirada - Ku abaabulo dhammaan xiriirada suuqgeyntaada hal xog-ururin suuq geyn ah.
Warqadaha Emailka - Ka xulo maktabadooda horay loo dhisay, moobiillada moobiilka lagu hagaajiyo si aad u isticmaasho sida ay tahay ama aad u habeyn karto sida aad jeceshahay.
Farriinta Qoraalka - U dir ogeysiis fariin qofeed shaqsiyeed, waqti xasaasi ah.
Daabacaadda Bulshada - Ku dheji cusbooneysiinta Facebook iyo Twitter, jadwal cusbooneysiinta gaarsiinta mustaqbalka iyo soo gaabi URL-yada si aad ula socon karto riix-marinnada.
Kormeerka Bulshada - Ku maaree shabakado badan oo warbaahinta bulshada hal shaashad ah, la soco taageerayaashaada iyo kuwa raacsan oo la soco wadahadallada shabakadaha bulshada.
Goobaha Bogagga - Abuur bogag moobiil ku habboon, deg deg deg ah iyo foomamka xulashada. Ku dhiirrigeli farriinta qoraalka, emaylka ama shabakadaha bulshada.
rasiidh - Abuur websaydh ama kuuboon qoraal ah oo aad ku qaybin karto farriin qoraal, emayl ama baraha bulshada.
Maaree Goobaha - Bartilmaameedka emaylka iyo qoraallada gaarka u ah goobta - isla markaana siiya marin u helidda xayeysiisyada.
Analytics - Ku hel aragtiyo qotodheer oo suuqgeyn ah adoo mideeya macaamiishaada.
signal emaylka iyo degsiimooyinka boggaga sheybaarada si buuxda ayaa loo qaabeyn karaa. Signal sidoo kale wuxuu leeyahay xoog leh API loogu talagalay isdhexgalka nidaamyada xisbiga saddexaad. Iyo Signal ayaa lagu dhisay oo wax ku darsaday ilo furan, sidoo kale!
Tags: AnalyticsrasiidhEmail Marketingtaasoboggaga soo degayasuuqgeynta ku saleysan goobtabogagga degitaanka moobiilkaXeerarka QRsignalkaSMSsuuq-geynta suuqafariin qoraal ah